Ukuhlangana neNkosi Futhi | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
2018-11-07 05:45:26 1
Ukuze sifeze lokhu, mina nomkami sahlela ukuvakashela umuzi welinye lamalungu eBandla LikaNkulunkulu USomandla, indoda eyaziwa ngokuthi uMfowethu uZhang. UMfowethu uWang noDade uLi, nabanye abangamaKhatholika nabo beza. Lapho ngibona ukuthi nganginabantu abaningi engangihamba nabo ingqondo yami yakhululeka. Ngemva kokuxoxa nje okungatheni, sonke sahlala phansi ngabe sengibuza abafowethu nodadewethu lokhu: “Ngokuphathelene nokubuya kweNkosi ukuqonda kwami yilokhu: Uma iNkosi ibuyela ukuzokwenza umsebenzi wokwahlulela, abantu abalungile bayohlukaniswa kwababi. Khona-ke abantu abalungile bayokwamukelwa ezulwini yiNkosi futhi bayoyihlangabeza, ngenkathi ababi beyothunyelwa esihogweni futhi bajeziswe. Nina nithi iNkosi isibuyile futhi yenza umsebenzi wokwahlulela, pho kungani singakaboni nakunye kwalezi zinto kwenzeka?”
Umfowethu uWang waphendula: “Mfowethu, umbono wami wawufana nowakho ukuthi ngangikholwa ukuthi ukubuya kweNkosi kwakusho ukuthi abantu abalungile babezohlukaniswa nabantu ababi, ukuthi abantu abalungile bahlale ezulwini kuze kube phakade futhi ababi babezojeziswa, nokuthi uma singaboni lokhu kwenzeka khona-ke lokho kwakufakazela ukuthi iNkosi yayingabuyile. Kodwa emva kokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla ngabona ukuthi yimiqondo kanye nokucabanga kwethu kuphela futhi akuyona indlela yangempela uNkulunkulu asebenza ngayo. Indlela uNkulunkulu enza ngayo umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina yinto ehlelwa futhi ilungiswe uNkulunkulu. Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kuphakeme kunamazulu, futhi emehlweni kaNkulunkulu abantu bancane njengothuli, ngakho-ke singuwaqonda kanjani umsebenzi kaNkulunkulu? EBhayibhelini kuthi: ‘Ngubani oqondise umoya weNkosi? Noma ngubani obe umeluleki wakhe, futhi omfundisile? Ubonisane nobani, futhi uqondiswe ngubani, futhi wamfundisa indlela yobulungiswa, futhi wamfundisa ulwazi, futhi wamkhombisa indlela yokuqonda? Bhekani abeZizwe banjeconsi ebhakedeni, futhi babalwa njengohlamvu oluncane kakhulu lwesilinganiso; bhekani iziqhingi zinjengothuli oluncane’ (Isaya 40:13-15). Umuntu ngamunye kithi usebenzisa ubuchopho ukucabanga, ngakho-ke singacabanga ngomsebenzi kaNkulunkulu sisho esikuthandayo kodwa uNkulunkulu akalokothi enze umsebenzi wakhe njengokucabanga kwethu. Uma sisebenzisa ukucabanga kwethu ukubeka imigoqo yomsebenzi kaNkulunkulu, asive yini lapho siziphatha ngokuzithwala ngokweqile? Pho-ke, uNkulunkulu uwenza kanjani umsebenzi wakhe wokwahlulela? Ubahlukanisa kanjani abalungile kwababi? Asifunde amavesi amaningana amazwi kaNkulunkulu uSomandla ukuze asisize siqonde. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Umsebenzi wokwahlulela ngokaNkulunkulu uqobo, ngakho ngokwemvelo wenziwa nguNkulunkulu uqobo; ungenziwe umuntu esikhundleni Sakhe. Ngoba ukwahlulela kungukunqoba isintu ngeqiniso…. Okusho ukuthi, ezinsukwini zokugcina, uKristu uyosebenzisa iqiniso ukuze afundise abantu basemhlabeni futhi enze onke amaqiniso aziwe kubo. Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela’ (‘UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso’ kwethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Izinsuku zokugcina sezifikile. Zonke izinto ezidalweni ziyohlukaniswa ngokohlobo lwazo futhi zehlukaniswe ngezigaba ezehlukene ngokwemvelo yazo. Lona ngumzuzu lapho uNkulunkulu embula khona umphumela wabantu nesiphetho sabo. Uma abantu bengabhekani nokusola nokwahlulela, ngeke kube khona indlela yokudalula ukungalaleli kanye nokungalungi kwabo. Kungokusola nokwahlulela kuphela lapho kuyokwambula khona isiphetho sazo zonke izinto. Umuntu uveza konke ayikho kuphela lapho ethola ukusola nokwahlulela. Ububi buyobekwa nobubi, ubuhle bubekwe nobuhle futhi sonke isintu siyohlukaniswa ngokohlobo lwaso. Ngokusolwa nokwahlulelwa, umphumela wakho konke okudaliwe uyokwambulwa, ukuze ububi buthole ukujeziswa nobuhle buklonyeliswe, nabo bonke abantu babe ngaphansi kokubusa kukaNkulunkulu. Wonke lo msebenzi kufanele ufezeke ngokusola nokwahlulela okulungile. Ngenxa yokuthi inkohlakalo yomuntu isifike esicongweni kanye nokungalaleli kwakhe kube kubi kakhulu, yisimo esilungile sikaNkulunkulu kuphela, leso esilumbanise ikakhulu ukusola nokwahlulela futhi esembulwa ngezinsuku zokugcina, esingaguqula ngokuphelele futhi siphelelise umuntu. Yilesi simo kuphela esingadalula ububi futhi ngalokhu sijezise kabuhlungu bonke abangalungile’ (‘Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)’ kwethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Inhloso yomsebenzi wami wokunqoba akuyona eyokunqoba ngoba kufanele kunqotshwe nje kuphela, kodwa ukunqoba ukuze kwembulwe ukulunga nokungalungi, ukuthola ubufakazi besijeziso somuntu, ukulahla ababi, kanye futhi, ikhkhulu, nokuphelelisa labo abalalela ngokuzimisela. Ekugcineni, bonke bayohlukaniswa ngokohlobo lwabo, kanti bonke abaphelelisiwe, imicabango yabo igcwele ukulalela. Lo ngumsebenzi wokugcwaliswa ekugcineni. Kodwa labo abagcwele ukuhlubuka bayojeziswa, bathunyelwe ukuyosha emililweni futhi beqalekisiwe kuze kube phakade’ (‘Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu’ kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Sinomqondo wokuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ngokuqondile ngowokwahlukanisa ukolweni okhuleni, izimbuzi nezimvu, izinceku ezinhle nezinceku ezimbi, ngamanye amazwi, ukwahlukanisa abantu abalungile kwababi nokubeka ngakunye ngokohlobo lwakho. Kodwa uma sicabanga ngakho, kunamaKristu angaphezu kwezigidigidi ezimbili emhlabeni jikelele—futhi wonke athi anokholo lwangempela kuNkulunkulu futhi ayamthanda uNkulunkulu—ngakho-ke sizokwahlukanisa kanjani abalungile nababi? Uma uNkulunkulu enquma ukuthi wena ulungile nokuthi mina ngimubi, ngeke ngihambisane nalokho ngoba ngizibona ngingumuntu omuhle. Uma uNkulunkulu enquma ukuthi ngingumuntu omuhle nokuthi omunye umuntu mubi, ngeke neze ahambisane nalokho. Pho-ke manje kufanele sazi kanjani ukuthi ubani omuhle futhi ubani omubi? Asikwazi, ngoba thina bantu asinazo izimiso noma izindinganiso zokulinganisa lokhu. Ukube uNkulunkulu ubezosilinganisa kanje, ngokuqinisekile besingeke sivume futhi besingaba neyethu imibono ngakho, njengokucabanga ukuthi uNkulunkulu akanabulungiswa futhi akanakho ukulunga. Pho-ke, le ndaba yokuqoqa abantu ngokwezici zabo beyizoqhubeka kanjani? INkosi ebuyayo ezinsukwini zokugcina nguKristu wezinsuku zokugcina—uNkulunkulu uSomandla—osebenzisa amaqiniso ukwenza umsebenzi wokwahlulela. Kuwo wonke amaKristu, ukwambula ukuthi ngubani ongukolweni, ngubani owukhula, ngobani izimbuzi, ngobani izimvu, ngobani izinceku ezinhle, ngobani izinceku ezimbi, yiziphi izintombi ezihlakaniphile, yiziphi eziyizintombi eziwulayo, konke kwenziwa ngokusebenzisa amaqiniso. Amazwi kaNkulunkulu ambula wonke umuntu, futhi izintombi ezihlakaniphile yilabo abakholwa kuNkulunkulu ngempela futhi abathanda iqiniso. Lapho bezwa ukuthi omunye ufakaza ngokuza kukaNkulunkulu bayaphuma ukuze bamamukele futhi bahlolisise amazwi kaNkulunkulu nomsebenzi kaNkulunkulu. Bayaliqaphela iphimbo likaNkulunkulu futhi bamukele umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina, futhi ekugcineni bazuza ukuhlanzwa nensindiso ngokwahlulela kukaNkulunkulu. Phakathi nezinhlekelele ezinkulu banokuvikelwa nguNkulunkulu futhi bayakwazi ukusinda, bese ekugcineni bengeniswa embusweni kaNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi, ngenxa yokuthi izintombi eziyiziwula azilithandi iqiniso, ngoba ziphikelela ekubambeleleni emibonweni yazo kanye nokucabanga noma ukukholwa ngamahemuhemu, ngoba azifuni noma ziphenye umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina—futhi ezinye zazo zize zilandele ngisho abaholi benkolo ekumelaneni nokulahla uNkulunkulu futhi zenqabe ukusindisa kukaNkulunkulu kwezinsuku zokugcina—ziyokwambulwa njengabenzi bokubi ngomsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina futhi zizoshabalaliswa. Isiphetho sazo siyoba ukubhekana nokujeziswa ngesikhathi sezinhlekelele ezinkulu. Kulokhu, singabona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokubeka ngakunye ngokohlobo lwakho ezinsukwini zokugcina awenziwa ngokuvumelana nemibono nokucabanga kwethu. Esikhundleni salokho, uNkulunkulu usebenzisa indlela yokwahlulela ukwenza umsebenzi wokudalula abantu, futhi umphumela wokugcina wukuthi wonke umuntu ambulwe ngokuphelele futhi abekwe kanye nokohlobo lwakhe ngokuthi uyalamukela na iqiniso noma umelana neqiniso. Lokhu akusikho na ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kanye, ubulungiswa bukaNkulunkulu, ukulunga kukaNkulunkulu? “
Okwedlule: Iposi “Lejuba”